Home News Farmaajo oo colaad ka dhex huriyay Reer Hobyo iyo C/qeeybdiid iyo xaaf...
Farmaajo oo colaad ka dhex huriyay Reer Hobyo iyo C/qeeybdiid iyo xaaf oo fooda-isdaray, mooshin loo gudbiyay!!!
Dekadda hobyo waxaa Ku baxeeysa lacag dhan 2. 5milyan oo dollar taasi oo ay qaadaneeyso shirkad shiinees ah.
C/qeeybdiid oo lagu qancinaayo ayaa lagu wargaliyay in dekadda hobyo lagu wareejinaayo taaas oo dhalisay muran iyo in dhismaha hakad la galisay.
Kheeyre ayaa dabada ka riixaya C/qeeybdiid madaxweyne farmaajo ayaa qudhiisa Waxaa uu doonayaa in la abuuro qalalaase galmudug dhexdeeda ah si xaaf meesha looga saaro.
Xildhibaanadda baarlamaanka Maamulka galmudug ayaaa hadda la damacsan yahay in la abaabulo si ay xilka uga qaadan xaaf waxaana loo wakiishay C/qeeybdiid.